ကိုယ်တိုင်တီးဝိုင်းမှာ ပါဝင်တီးမှုတ်ပြီး ပြည်သူလူထုကြီးကို စိတ်ခွန်အားပေးရင်း ရင်ထဲကဆန္ဒကို ထုတ်ဖေါ်လိုက်တဲ့ မင်းသားချော ထွန်းကိုကိုရဲ့ ဗီဒီယို – Online News Post
ထွန်းကိုကို က တော့ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ အခြေ အနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ လူထုတွေနဲ့ အတူ တစ်သားတည်း ရပ်တည် နေတာ ဖြစ်ပြီး လှုပ်ရှား မှု ပုံလေးတွေကို လည်း လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာ ထက်မှာ တင်ပေး လေ့ရှိတာ တွေ့ရ ပါ တယ် … .
ဒါ့ အပြင် လိုအပ် တဲ့ ပစ္စည်း တွေနဲ့ အစား အသောက် တွေ ကိုလည်း တက်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ လိုက်လံ ကာ လှူဒါန်းမှု တွေ ပြုလုပ် နေတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပဲခူးသား ဖြစ်တာ ကြောင့် ပဲခူးက ပြည်သူလူထုကို ရှေ့ကဦးဆောင် ကာ ငြိမ်းချမ်း စွာ ဆန္ ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကို လည်း ပြုလုပ် လျက်ရှိပါ တယ် … .
အခု လည်း ဆန္ဒပြ ပြည်သူတွေ စိတ်ခွန်အား တက်ကြွ စေရန် တီးဝိုင်းမှာ ကိုယ်တိုင် ပါဝင် တီးခတ်ကာ ဖျော်ဖြေ ပေးရင်း ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် ခဲ့ပြန်ပါ သေးတယ် ။ မမော မပန်းနိုင် အောင် မျိုးစုံ လူထု လှုပ်ရှား မှုမှာ ပါဝင် အားဖြည့် ပေးနေတာ တကယ်ကို လေးစား မိတာကြောင့် ထွန်းကိုကို ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို မျှဝေ ပေးလိုက် ပါတယ် နော် … .
Photo : Yanpaing Tunko
ထြန္းကိုကို က ေတာ့ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့ အေၿခ အေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ လူထုေတြနဲ႔ အတူ တစ္သားတည္း ရပ္တည္ ေနတာ ျဖစ္ၿပီး လႈပ္ရွား မႈ ပုံေလးေတြကို လည္း လူမႈ ကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ ထက္မွာ တင္ေပး ေလ့ရွိတာ ေတြ႕ရ ပါ တယ္ … .
ဒါ့ အျပင္ လိုအပ္ တဲ့ ပစၥည္း ေတြနဲ႔ အစား အေသာက္ ေတြ ကိုလည္း တက္နိုင္တဲ့ ဘက္ကေန လိုက္လံ ကာ လႉဒါန္းမႈ ေတြ ျပဳလုပ္ ေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ပဲခူးသား ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ ပဲခူးက ျပည္သူလူထုကို ေရွ႕ကဦးေဆာင္ ကာ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ဆႏ္ ဒထုတ္ေဖာ္မႈေတြကို လည္း ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိပါ တယ္ … .
အခု လည္း ဆႏၵၿပ ျပည္သူေတြ စိတ္ခြန္အား တက္ႂကြ ေစရန္ တီးဝိုင္းမွာ ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ တီးခတ္ကာ ေဖ်ာ္ေၿဖ ေပးရင္း ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ျပန္ပါ ေသးတယ္ ။ မေမာ မပန္းနိုင္ ေအာင္ မ်ိဳးစုံ လူထု လႈပ္ရွား မႈမွာ ပါဝင္ အားျဖည့္ ေပးေနတာ တကယ္ကို ေလးစား မိတာေၾကာင့္ ထြန္းကိုကို ရဲ့ ဗီဒီယိုေလး ကို မၽွေဝ ေပးလိုက္ ပါတယ္ ေနာ္ … .
Previous post သနပ်ခါးကန်ပိန်းလုပ်မယ့် လူထုကို အားပေးရင်း ကိုဗစ်ကိုလည်းဂရုစိုက်ကြဖို့ သတိပေးစကားပြောလိုက်တဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်
Next post Gen Zတို့ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်သွားစေမယ့် အံ့မခန်း လှုပ်ရှားမှုကြီးတစ်ခု